Global Voices teny Malagasy » NewsILike sy ny mpanangona zava-kanto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Oktobra 2018 3:02 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Hevitra, Mediam-bahoaka, Teknolojia
Nanandrana ny NewsILike.com, tranonkala mpanangom-baovao napetraky ny ekipa ahitana an'i Jim Moore, mpiara-miasa ao amin'ny Berkman , mpikatroka Darfur  sady mpiara-dia ato amin'ny Global Voies aho. Mampahafantatra ny hevitra “fanangonana artistika”  i Jim, hevitra hoe afaka ho fanehoana zava-baovao mitovy fomba amin'ny bilaogy ny fanangonam-baovao.
Ka ity no dingana voalohany mankany amin'ny fitaovana fanangonam-baovao Afrika , ahitana ny fampahalalam-baovao mahazatra tsy mamoaka afa-tsy tantara miresaka Afrika, sy ireo bilaogy afrikana mahafinaritra. (Rehefa tsy miditra aterineto hijery ny kaonferansa feno aho, dia hanangona loharanom-baovao lavidavitra kokoa.) Efa mahita tantara sy lahatsoratra mahaliana maromaro sahady aho izay tsy hita ao amin'ny BlogAfrica  na ny loharanom-baovaoko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/17/127652/
 mpikatroka Darfur: http://www.passionofthepresent.org
 “fanangonana artistika”: http://blogs.law.harvard.edu/jim/2005/03/09#a973
 fitaovana fanangonam-baovao Afrika: http://ethanz.newsilike.com/